Nisa oo suaalo waydiinaysa masuul katirsan gobolka banaadir oo looga shakisan yahay qaraxii dowladda hoose. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Nisa oo suaalo waydiinaysa masuul katirsan gobolka banaadir oo looga shakisan yahay qaraxii dowladda hoose.
NISA ayaa shalay u yeertay G/ ku xigeenka Gobolka banaadir ee Arimaha Bulshada Basmo Caamir Shakeeti si wax loooga weydiiyo qaraxii ka dhacay xarunta G/banaadir.
Basma Caamir oo ka mid ahayd dadkii fadhiyey shirka balse daqiiqado yar ka hor banaanka u soo baxday intii uusan qaraxa dhicin ayaa la weydiiyey waxa ay ka og tahay qaraxa sida uu u dhacay iyo inay sharaxaad ficil ah ka samayso sida loogu fadhiyey kuraasta shirka.
NISA shakiga ay ka qabeen Basma Caamir oo iska yaraa ee ay banaanka ay uga soo baxday shirka ee qaraxa ka hor ayaa intii aan loo yeerin shalay waxa lagu soo wargeliyey NISA in Basma Caamir ay Baasabooro u samaysanyso dhamaan caruurteeda inta aan lahayn Passport ayna dalka ka dhoofayso.
Shalay intii ay ku sugnayd Xarunta immigrationka waxaa dhaawac fudud uu soo gaaray wiilkeeda kadib is rasaasayn la dhacday agagaarka Xarunta ay joogtay waxaana la sheegay in xabadihii dhagxax at ku dhaceen in wiilka uu dhaawac fudud gaarsiiyey.
Previous articleSawiro:- Shabaabkii iyo Daacishkii ugu badnaa oo maanta lagu xukumay Boosaaso + Qaraxyo lasoo bandhigay.
Next articleXog:- Shariif Sakiin oo noqday ganacsadaha leh saamiga ugu badan ee banki caalami ah oo kuyaal Jabuuti.
Atoore July 29, 2019 At 3:35 pm
Labo arimood baa loo cuskanayaa Basmo Caamir Shakeeti.
1.Qaraxii ka dhacay xarunta dawlada hoose ee xamar intuusan qarxin in yar ka hor bay ka tagtay meeshii uu qaraxu ka dhacay.
2.Caruurteeda oo dhan bay u suubinaysaa baasa booro.
haddii an cadaymo kale oo macquula lagu hayn Basma labada la sheegay qiil ma noqon karayaan.Basma way ka kacday meeshay fadhiday kabacdina qarax baa dhacay intaas kaliya dambi loogfama dhigi karo Basma.Caruureteedana way u qaadi kartaa baaso booro oo sax ma aha waxay baasa boorada caruurta ugu qaadaysaa dambiyay isku ogtahay.Maya ee waxaa loo baahan yahay war sugan oo loo cuskado Basma Caamir Shakeeti.
(YAA YAQAAN MACNAHA SHAKEETI)?
JJ July 29, 2019 At 5:28 pm
Basma hadii arrinta horay wax uga ogeed baasaboorada mar horay bey u samesanlaheed .
Qarrixii ka dib ayeey go’aansatay in eey iskaaga tagto sababtoo ah Ilaahay ayaa ka badnaadiyay oo aad iyo aad ayeey u sigatay haddana hadii eey sii joogto ayada iyo caruurteeda waa doqonimo.
NISA waa in eey soo qabtaan dadka kamerooyinka damiyay laba berri ka hor iyo kuwa yiri gabar indhaha la’ ayaa isqarxisay kuwaas waa in la toogtaa.
Mubarik Yusuf July 30, 2019 At 3:14 am
Ha is qarxin adigu.